Su-26 DOWNLOAD FSX - Rikoooo
အရွယ် 5.99 ကို MB
အတူ OK ကိုစမျးသပျ FSX acceleration + SP2 + FSX-SE
Author: အမည်မသိ :-(
စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အသေးစားဆိုဗီယက် aerobatic လေယာဉ်! မော်ဒယ်များ၏ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုနှင့်အတူမကြာခဏအဖြစ်ရိုးရှငျး "အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ" ကျော်လွန်တတ်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်ကောင်းစွာကျိုးနပ်သည်။
နှစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ "Ferrari ပြိုင်ကား" နှင့်ဤပုံစံအတွက် "Mclaren" သတ္တုထင်ဟပ်နှင့်တိကျသောအသံပါဝင်သည်။ တစ်ဦးက detailled ကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်း (VC ကို) သင်တို့ကိုလည်းကိုပျော်ရွှင်စေသည်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Su-26 တစ်ခုတည်း radial အပြန်အလှန်အင်ဂျင်စွမ်းအားဖြင့်ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကနေ single-ထိုင်ခုံနေရာ aerobatics လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SU-26 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားဖြောင့်အတောင်ပံများနှင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆင်းသက်ဂီယာရှိပါတယ်, အဓိကဂီယာဟာအစိုင်အခဲတိုက်တေနီယမ်ကို arc အပေါ်တပ်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါ Su-26 မူရင်းလေးတစ်ဦးနှစ်ဦး-Blade ကျားကန်ရှိခြင်း, ဇွန်လ 1984 အတွက်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ထုတ်လုပ်မှုသန့်စင်ပြီးအမြီးမျက်နှာပြင်များနှင့်တစ်ဦး 26-Blade ဟော့ဖ်မန်းကျားကန်နှင့်တကွ, SU-3M မှ switched ။ နောက်ထပ်ပွုပွငျပွောငျးလဲ လုပ်. , စံပြအ 1986 ကမ္ဘာ့ဖလား Aerobatics ချန်ပီယံရှစ်မှာယောက်ျားရဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအသင်းဆုနှစ်ခုလုံးကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထားသော SU-26M3 သစ် M9F 430 မြင်းကောင်ရေအင်ဂျင်ကို 2003 နှင့် 2005 Aerobatic ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအဖြစ် 2004 ဥရောပချန်ပီယံကြီးစိုး။ အတူ ဒါဟာ 1990s အတွက်အာဂျင်တီးနားမှတင်ပို့ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ်လျှပ်စစ်ကင်ဘာရာ B-57B FSX & P3D